Matte, Shimmer, Satin finish မျိုးကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ့်3in 1 Eyeshadow palette! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Matte, Shimmer, Satin finish မျိုးကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ့်3in 1 Eyeshadow palette!
Warm toned shades မျိုးကိုဖန်တီးလိမ်းခြယ်လိုတဲ့သူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Palette လေး ဖြစ်တဲ့ Phoenix Rising Eyeshadow Palette လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Palette လေးကို Pretty Vulgar ကနေ အသစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီလိုက်တာဖြစ်ပြီး ထုတ်ပိုးမှုပုံစံကအစ Customer တွေရဲ့ စိတ်အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ကောင်းမွန်တာကြောင့် Luxury product ကိုအသုံးပြုနေသလိုခံစားရပြီး သူမတူတဲ့ နူးညံ့မှုကိုပါပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ Creamy ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး လွယ်ကူစွာ ခြယ်သလို့ရနိုင်ပါတယ်။ အရောင်ထွက်ကောင်းအောင်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားပြီး ကြာရှည်ခံအောင်ပါ နည်းပညာတွေပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့် အရမ်းကောင်းမွန်ပြီး အသုံးတည့်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာစေးကပ်ကပ်ဖြစ်နေခြင်းမျိုးလည်းမရှိတဲ့အပြင် ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အသားအရေပါအသုံးပြုရအဆင်ပြေရန်အတွက် ရနံ့လည်းမပါဝင်ပါဘူး။ အရောင်အားဖြင့် Untamable (golden champagne), Always Rising (peachy nude), Slay (shimmering golden peach), Fierce Desire (copper), Is Fire (deep dusty orange), My Ash (warm soft brown), Light My Fire (medium rusty brown), Seduction Reborn (burnt red), Resurrected Sin (ruby red), Devilish Darling (red violet), Blowing Smoke (burgundy), Fly by Night (deep plum) ဆိုပြီး ၁၂ ရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ တနေကုန် ကြာရှည်ခံပြီး အရောင်ထွက်အားပိုမိုကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ပထမအဆင့်အနေနဲ့ Eyeshadow primer ကို Eyeshadow အသုံးမပြုခင် မျက်ခွံတဝိုက်လိမ်းခြယ်ပေးပါ။ Makeup setting spray မျိုးကို လိမ်းခြယ်မယ့် Brush များဖြန်းပြီးမှ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရောင်ကို စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Image Source: www.prettyvulgar.com